मेसी र बार्सिलोनाको सम्बन्ध ! - सबै खेल
मेसी र बार्सिलोनाको सम्बन्ध !
२१ भाद्र २०७७, आईतवार १५:४५ September 6, 20200Comments barcelona, bartomeu, messi
अनुहारमा हाँसो छैन । हात मिलाइ पनि छैन । न त मिलापत्र नै । लियोनल मेसी बार्सिलोनामा बस्ने त तय भएको छ तर पूरा घटनाक्रमको सुखद अन्त्य भने भएको छैन ।
कम्तीमा अहिलेका लागि दुई पक्षबीचको ‘तँछाडमछाड’ को स्थिति सकिएजस्तो देखिन्छ, तर होइन । खासमा न त मेसीले केही पाएका छन्, न बार्सिलोनाले । क्लब अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउ त झनै केही पाएका छैनन् । उनले विश्वकै सर्वाधिक उत्कृष्ट खेलाडीलाई क्लब छाड्नबाट पनि रोक्न सकेनन् ।
बरु मेसी नै अगाडि आए । भने, ‘म बार्सिलोनामै रहनेछु ।’ एउटै क्लबमा २० वर्ष बिताएपछि मेसीले बार्सिलोना छाड्न चाहनु पक्कै दुःखद हो । उनले पछिल्लो ९ महिनादेखि आफू खुसी नरहेको देखाइरहेका नै थिए । उनी भन्थे, ‘म खुसी हुन चाहन्छु, तर क्लबमा मैले खुसी भेटाइरहेको छैन ।’
खासमा मेसी शक्ति सन्तुलनको लडाइँमा उत्रेका पनि होइनन्, न त उनी नयाँ अझ महँगो अनुबन्ध चाहन्थे । उनी स्पष्ट थिए, क्लब छाड्न चाहन्थे ।
आखिरमा मेसीले आफू बार्सिलोनामै बस्न चाहेको कारण यस्तो देखाए, क्लबप्रतिको अपार माया । माया भन्दैमा यसमा नयाँ अनुबन्ध र वाचा हुनुपर्छ भन्ने त छैन । मेसी र बार्सिलोनाबीच जे जस्तो भयो, त्यसैले अधिकांशलाई दुःखी त बनाएको छ । उनले आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न क्लबको मञ्च रोजेनन्, बरु गोलडटकमलाई सम्झे । उनले जे जति बोले । त्यो सुखद समाचार हुनुपर्थ्यो, तर यो पटक्कै त्यस्तो रहेन । त्यसमा निराशा पनि झल्कन्थ्यो ।
त्यसैले मेसी बार्सिलोनामै बस्ने भए पनि खुसीको भावमा देखिएनन् । मेसीले आफ्ना मनका भावना पोख्ने क्रममा इमान्दारिता पनि देखाए । उनले माने, आफू र बार्सिलोनाबीचको सम्बन्धमा सबै ठीक छैन । उनले पूरा घटनाक्रमलाई लिएर माफी पनि मागेका छैनन् । फेरि क्लबको चर्को न चर्को आलोचना पनि गरेनन् । खाली यत्ति भने, अध्यक्ष बार्टोमेउले वास्तै गरेनन् । गत सिजनमा उनले सुरुदेखि क्लब छाड्न सक्छु भनिरहेका थिए, बार्टोमेउले सुन्दै सुनेनन् ।
मेसीको अन्तर्वार्ताबाट प्रस्ट हुन्छ, उनी अदालत पटक्कै जान चाहँदैन थिए । क्लब छाड्दा ७० करोड युरो तिर्नुपर्ने बुँदालाई उनले कानुनी मुद्दा नै बनाउन चाहेनन् । उनी त यसलाई उल्टै रोक्न चाहन्थे । अझै धेरैभन्दा धेरै समर्थक उनकै पक्षमा होलान्, अनि केही संख्यामा मेसीले बार्सिलोना छाडेकै राम्रो भन्ने होलान् । अनि यसक्रममा उनका केही समर्थकले उनको कामको विरोध गरे, उनका विरोधी अहिले उनका समर्थक भएको हुन सक्छ ।
उनका खास समर्थक भने पक्कै दुखित छन् । यी समर्थकलाई चोट पुगेको छ । तिनलाई लागेको हुनुपर्छ, आफ्नो भविष्यलाई निर्णय गर्ने अधिकार मेसीलाई नै हो, अरूलाई होइन । अनि मेसीले अन्त्यमा त्यही काम गरेका छन्, जुन परिस्थितिअनुसार ठीक थियो । मेसीले भने जस्तै होस्, उनको नेतृत्वमा बार्सिलोनाले मैदानमा अझ धेरै जितोस् । युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा मेसीको राम्रो गर्ने इच्छा रहेछ, त्यो पनि पूरा होस् ।
← कीर्तिमानी मूल्यमा वुल्भ्ससले भित्र्यायो पोर्चुगिज स्ट्राइकर
आईपिएलः उद्घाटन खेलमा मुम्बई र चेन्नाई भिड्ने, सन्दीपको टिम दिल्ली पञ्जावसँग खेल्ने →
स्वीट्जरल्यान्डसँग रोकियो जर्मनी
२२ भाद्र २०७७, सोमबार १०:४३ 0
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १४:१३ 0
आहा रारा गोल्डकप : अन्जनको गोलमा मनाङ सेमिफाइनलमा
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार २०:५१ 0